Madaxweynaha Dawladda Puntland oo Gaalkacayo Kaga Qayb Galay Aas Qaran oo Loo Sameeyey Fiqi Bashiir Cabdulle Cismaan.
July 15, 2017 - Written by Suldaan Samawade
Madaxweynaha Dawladda Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa maanta 15 July 2017 magaalada Gaalkacayo kaga qayb galay aas qaran oo loo sameeyey Fiqi Bashiir Cabdulle Cismaan oo horaantii bishan ku geeriyoodey dalkaasi Sweden.
Aaska qaran ee loo sameeyey marxuun Fiqi Bashiir Cabdulle Cismaan ayaa waxaa Madaxweunha Dawladda Puntland kala qayb galay Madaxweyne ku xigeenka Dawladda Puntland Egn. Cabdixakiin Xaaji Cabdulaahi Cumar Camey, guddomiye ku xigeenka koowaad ee golaha wakiiladda Puntland, Cabdixamiid Shiikh Cabdisalaan, masuuliyiin ka tirsan goloyaasha dawladda Puntland, qaar kamida Isimadda Puntland iyo qaybaha kala duwan ee bulshadda ku dhaqan magaalada Gaalkacayo.
Madaxweynaha Dawladda Puntland oo ku hadlaya afka goloyaasha Dawladda Puntland iyo kan shacabka Puntland ayaa uga tacsiyey ummaada Soomaaliyeed, gaar ahaan shacabka reer Puntland, eheladii, qaraabadii asxaabtii iyo caruurtii uu ka geeriyoodey marxuunku, waxaana Madaxweynuhu uu sidoo kale uga tacsiyey geerida marxuunka dhammaan isimada Soomaaliyeed meel kasta oo ay joogaan.
” Waxaan rabaa anigoo ku hadlaya Magacayga kan Dawladda iyo kan shacabka Puntland-ba halkani inaan uga diro tacsi ummaada Soomaaliyeed gaar ahaan shacabka Puntland geeridaas kutimi Fiqi Bashiir Cabdulle Cismaan, illaahay ha’u naxariistee wuxuu ahaa shakhsi qiime weyn ugu fadhiya Soomaaliya, usoo shaqeeyey, wax badan usoo taray ayuu ahaa, inagana waajibka inaga saaran waxay tahay inaan u ducayno, Illahay u barrino inuu u naxariisto” ayuu yiri Madaxweynaha Dawladda Puntland.
Sidoo kale Madaxweynaha ayaa si gaara ugu tacsiyeeyey eheladii, qoysaskii, caruurtii iyo qaraabadii uu ka baxay marxuunku, waxaana uu Illahay uga baryey inuu samir iyo iimaan kasiiyo dhammaantood geeridaa naxdin tale ee ku timi Fiqi Bashiir Cabdulle Cismaan Codweyne.
Dhinaca kale Madaxweynaha Dawladda Puntland ayaa shacabka iyo masuuliyiinta dawladda ee kasoo qayb galay aaskani qaran ee loo sameeyey marxuun Fiqi Bashiir Cabdulle Cismaan kula dardaarmay in lays cafiyo oo laysa saamaxo laguna cimra qaato geeridani walaalkeen maanta ku timi, lana ogaado in ruux walba oo nafi ku jirto keligii lagu xisaabidoono qabri labo mittir ah.
Madaxweyne ku xigeenka dawladda Puntland Eng. Cabdixakiin Xaaji Cabdulaahi Cumar Camey ayaa isna dhankiisa ummaada Soomaaliyeed gaar ahaan shacabka Puntland eheladii, asxaabtii qoysaskii iyo caruurtii uu ka baxay marxuunku uga tacsiyeeyey, waxaana Madaxweyne ku-xigeenku uu sidoo kale illaahay uga baryey marxuunka inuu u naxariisto, qabrigana u waasiciyo, su’aasha qabrigana Alle u fududeeyo, isla markaana uu illaahay ”SWC” ku abaal mariyo Janadiisa kuwa ugu derejadda sareeya.
Ugu danbayntii, Madaxweynaha Dawladda Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa uga mahad naqay dhammaan dadka ehlu-sharafka ah ee kasoo qayb galay aaskani qaran ee loo sameeyey marxuunka, waxaana uu sidoo kale bogaadiyey guddiga qaban qaabadda aaskani qaran.